Macallinka loo badinayo inuu qabanayo Real Madrid oo la sheegay! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Macallinka loo badinayo inuu qabanayo Real Madrid oo la sheegay!
Macallinka loo badinayo inuu qabanayo Real Madrid oo la sheegay!
(Madrid) 02 Maajo 2018 – Macallinkii hore ee kooxda SSC Napoli ee Maurizio Sarri ayaa haatan noqday ninka ugu cad cad macallimiinta lala xiriirinayo kooxda Real Madrid kaddib markii taxa laga saaray macallin Mauricio Pochettino.
Zinedine Zidane ayaa si lama filaan ah isu casiley todobaadkan kaddib markii uu hantay 3 Champions League oo xiriir ah, isagoo dareensan inuu hantay wax kasta oo loo qaadi lahaa kooxda Cadcadka ee Bernabeu.
Waxaa dookha 1-aad markiiba lagu sheegay Pochettino, yeelkeede, wuxuu dhowaantan uun qandaraaska u kordhiyay kooxdiisa Tottenham Hotspur, oo aan wax dan ah ka lahayn inay fasaxdo.
Sida ku dhigan Cadena Cope fiidkan, maaddaama Pochettino xisaabta laga saaray waxaa cad cad Sarri, iyadoo weliba ilo ku dhow dhow Real Madrid ay sheegeen in Sarri uu “70 boqolkiiba noqonayo macallinka cusub ee kooxdaasi.
Previous articleGOOGOOSKA: Belgium vs Portugal 0-0 (Beligum & Portugal oo barbaro dhacay)
Next articleIidheh ay samaynayaan Messi & Neymar oo cambaarayn aan caadi ahayn la kulantay! (Maxaa lagu qoonsaday?)